गीतबाट डराएको राज्य « Bikas Times
प्रकाशित मिति : 17 April, 2019
केही दिनअघि अचानक पशुपति शर्माको एक गीतले निकै चर्चा पायो, सँगै गीतका स्रष्टा, सरकार र युवा संघजस्ता सत्ताका निकटस्थ संघ संस्थाहरु पनि चर्चाका पात्र बने । निश्चय पनि दिनेले महत्व दिएकै कारण त्यस गीतले चर्चा पाएको कुरामा शंका छैन । यहाँ यस आलेखमा त्यस गीतमा प्रयोग भएका शव्द, भाषा र विचारका बारे विश्लेषणको प्रयत्न गरिने छैन । निश्चय पनि ती स्रष्टाका निजी भावनासँग सम्बन्धित छन् । तर जब कसैको विचार तथा भावना सार्वजनिक हुन्छ र त्यसले समाजलाई प्रभाव पार्न थाल्छ, त्यो निजी हो भनेर उन्मुक्ति दिन भने मिल्दैन । सार्वजनिक भइसकेको र स्रोता तथा दर्शकबीच लोकप्रीय बनिसकेको गीत जब जनताबीचबाट फिर्ता लिइने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यो विषय जनचासोको विषय बन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । अझ एउटा गीतबाट जब राज्यले त्रसित मानसिकता प्रदर्शन गर्छ भने कुरा गम्भीर बन्न जान्छ ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवका नैसर्गिक अधिकार हुन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतन्त्रमा यस्ता अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुृपर्ने नकारात्मक अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिन्छन् । यस्ता अधिकारको प्रयोग गरेर आमजनताले राज्यकै आलोचना गरिरहेको हुन्छ र उसले व्यक्त गर्ने विचारले कहिलेकाहिँ राज्यलाई हानी पुर्याइरहेको हुन्छ । तर पनि नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व सम्झँदै राज्यले यस्ता अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । निकै दिन भइसक्यो, अस्ट्रेलियामा आफूलाई आदीवासी रैथाने दावी गर्नेहरुले संसदको प्रागणमै बसेर विरोध गर्दै निरन्तर आफ्नो सरोकार अभिव्यक्ति गरिरहेका छन र सरकारले महत्व दिई उनीहरुलाई त्यहाँबाट वलजफ्ती हटाउने प्रयत्न गरेको छैन । नेपालका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने पशुपति शर्माको गीत पनि यस्तै अभिव्यक्ति हो जसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्बोधन गर्दछ । तर यहाँ केहीले यसलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । उनको गीत कसलाई कस्तो लाग्यो ? गीतले कसलाई हानी र लाभ पुर्रयायो भनेर खोजी नीति गर्नुभन्दा पनि उनलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता छ कि छैन भनेर विश्लेषण गरिनु जरुरी छ । बरु विचार अभिव्यक्त गर्ने शैली उचित छ कि छैन र त्योे नैतिकता तथा कानुन
सम्मत छ कि छैन, भनेर हेर्नु उचित हुन्छ । निश्चय पनि शर्माको उक्त गीतमा प्रयोग भएका केही शव्द छलफल र वहसका विषय बन्न सक्लान त्यो अलग कुरा हो ।
गीतको अक्षर र खास खास शव्दको अर्थ चिर्ने प्रयास गर्नुभन्दा पनि समग्रमा भाव हेरिनु उचित हुन्छ । समग्रमा हेर्दा गीतले देशमा व्याप्त कूशासन, बेथिति, विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितताजस्ता कुराको कलात्मकरुपमा विरोध गरेको छ । तर शर्माको त्यो गीत सार्वजनिक अस्तित्व (यूट्यूव)बाट आधिकारिक रुपमा अलग (डिलिट) गर्नुुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । प्रश्न उठ्छ, आखिर किन ? गीत डिलिट गर्नुपर्ने बाध्यताका रुपमा जे जस्तो कारण अहिले चर्चामा छन् त्यो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल छ ।
गीत रोक्न जे उपाय अवलम्बन गरिएको भनेर भनिएको छ त्यो गलत छ । युवा संघले गीतका सम्बन्धमा एक विज्ञप्ति नै जारी गर्यो, यसको भाषा केलाउने हो भने भावहरुलाई परिमार्जन गर्न सल्लाह दिन सकिने धेरै ठाउँ छन् । त्यसो त युट्युवलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा अन्य स्रोतहरुको सक्रियतामा यो गीत छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध छन् । यसबाट पनि यो गीतको लोकप्रियताको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
एउटा कुरा निश्चय पनि हो, लोकतन्त्रको पूर्व शर्तका रुपमा स्वीकार गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष भने होइन । घृणा र विद्वेष फैलाउन नपाइने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य—मान्यतासँग सम्बन्धित छ । तर राज्य व्यक्ति होइन । उपर्युक्त मूल्यका आधारमा राज्यले आफ्नो काम कार्यवाहीविरुद्धको आलोचना नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भहरुको विश्लेषण विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य—मान्यताका आधारमा गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
यस आधारमा शर्माको गीत साँच्चै देशको हीतविरुद्ध र देशमा आमरुपमा घृणा फैलाउने सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल छ भने त गीतमाथि प्रतिवन्ध लगाउनुे र रोक्ने कुरालाई उचित नै ठहर्याउन सकिएला, होइन भने सम्बन्धित पक्षले यसका सम्बन्धमा उचित उत्तर दिनु नै पर्ने हुन्छ । सोच्नुपर्ने अवस्था छ, एउटा गीतबाट डराउने राज्यमा लोकतन्त्र कसरी गतिशील बन्न सक्ला ?
वीपी कोइरालाले बुझेको उत्तरी छिमेकी चीन
नेपाल र चीन प्राचीनकालदेखि नै अस्तित्वमा रहँदै आएका देशहरू हुन् । बौद्ध अनुश्रुतिअनुसार मञ्जुश्रीले बाग्द्वारदेखि
प्रचण्डलाई भ्रष्टाचारको मुद्दादेखि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफरसम्म हुनसक्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बल प्रयोग गरेर भए पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिनुपर्ने विचार
प्रचण्डः जहाँ जान्छन् त्यही ध्वंश
काठमाडौं । यति बेला सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा
जोखिममा पत्रकार : स्वास्थ्य संकटमा सूचना प्रवाह
रोगले व्यक्तिव्यक्तिवीचको फरक छुट्याउँदैन । रोगले पेशाकर्मी र सञ्चारकर्मी पनि छुट्याउँदैन । न त रोगले
कर्णाली प्रदेशका विपक्षी दलका नेता शाहीलाई कोरोना संक्रमण
कर्णाली प्रदेशसभाकाे विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको
कोरोना फैलन नदिन जुल्ला सदरमुकाममा निषेधाज्ञा जारी
जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सदरमुकामको मुख्य बजार क्षेत्रका केही व्यक्तिमा कोरोना
अयोध्या बारेको अभिव्यक्ती फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले आत्माआलोचना गर्नुपर्छ : बामदेव गौतम
सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अयोध्याका विषयमा पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फिर्ता लिएर